theZOMI: [mrsorcerer:37586] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တစ်ချက်လေးလှည့်ကြည့်ပေးပါ အမေ....
[mrsorcerer:37586] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တစ်ချက်လေးလှည့်ကြည့်ပေးပါ အမေ....
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တစ်ချက်လေးလှည့်ကြည့်ပေးပါ အမေ....
ကျွန်တော်ဒီနေ့ DVB ကထုတ်လွှင့်တဲ့ လက်ပန်းတောင်တောင် အမေ့ခရီးစဉ် သတင်းကို ကြည့်ခဲ့ရတယ်...။
အမေ့ကို အရမ်း ကရုဏာ သက်မိတယ်အမေ.... ဒီလိုပြောလို့ အမေက သနားစရာ ဖြစ်နေလို့လား.... ကွန်ဆူးမားက မတန်မရာ ဘာကောင်မို့လို့ အမေစုကို ကရုဏာဖြစ်ရတာလည်း ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ရှင်းမပြပါဘူးအမေ...... ကျွန်တော် ရှင်းမပြတတ်လို့ပါ။
ဒီနှစ်နွေရာသီ တအားပူပြင်းလွန်းတယ်အမေ..... အသက်(၅၀)မပြည့်သေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့တောင်မှ ဒီနွေနေ့လည်ခင်းမှာ ခရီးပြင်းမနှင်နိုင်တော့ဘူး...... အခု အသက်(၇၀)ထဲရောက်နေတဲ့ အမေ ကတော့ ရွာစဉ်ရွာဆက်ကို တစ်ချက်မညှိုးတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ခရီးဆက်နေတယ်...
အမေ့ရဲ့ ရင်းနှီးထားတဲ့ တန်ဘိုးတွေကို သိစေချင်လို့ အမေ အပင်ပန်းခံနေတာကို ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမေ.....
ဒါပေမဲ့ အမေ့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တန်ဘိုးက အမေ့အတွက် အမြတ်အစွန်းမရှိဘူး ဆိုတာ အမေရော... ကျွန်တော်တို့ရော သိခဲ့ပါတယ်...။
တကယ်တမ်း အမြတ်အစွန်းတွေရကြမှာက နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူတွေပဲ မဟုတ်လားအမေ....။
အမေ့ကို ၀ိုင်းပြီး လူမိုက်ဆန်ဆန် ရန်တွေ့ကြတယ်...။
အမေကမေးတယ်....`` သတင်းစာ ဖတ်ပြီးကြပြီလား......´´တဲ့။
အမေ့စကား မဆုံးခင် ချက်ချင်းပြန်ဖြေကြတယ်လေ...
`` တစ်ယောက်မှ မဖတ်ရသေးဘူးတဲ့.....´´ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦး...
ဖြေရာမှာက `` ကျွန်တော် မဖတ်ရသေးပါဘူး...´´ ဒါမှ မဟုတ်...
`` ကျွန်မ မဖတ်ရသေးပါဘူး..´´ ပေါ့နော်..... အခုတော့ ``တစ်ယောက်မှ မဖတ်ရသေးဘူး...´´ တဲ့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အဖြေတစ်ခုပါပဲ....
ဒါနဲ့ အမေက ဆက်ပြောတယ်... ``သတင်းစာဘာလို့ မဖတ်တာလဲ...´´
ဆိုတော့..... စကားမဆုံးသေးဘူး..... ချက်ချင်းကိုပဲ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့...`` သတင်းစာမှ မလာတာ၊ ဒီကို သတင်းစာ မရောက်ဘူး.....စသဖြင့် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အမျိုးမျိုး ၀ိုင်းအော်ကြတယ်...´´
မေးစရာဖြစ်လာတယ်အမေ... သတင်းစာမှာ သေသေချချာ တင်ပြထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကို မဖတ်ရသေးပဲနဲ့ ဘာကြောင့် ထပြီး ကန့်ကွက်ကြသလဲ ???
ဘယ်သူက ဘာတွေ ပြောထားသလဲ ????? ဆိုတာပေါ့ .....။
အမေ ရှင်းပြရင်းနဲ့ စိတ်တိုလာတာလည်း တွေ့ရတယ်အမေ...
`` ဒေသခံတွေ အရှေ့တက်ခဲ့.... ရွာခံတွေပြော... ရန်ကုန်က လာပြီးတော့....´´ ဆိုတဲ့ အမေ့အသံကိုလည်းကြားရတယ်....အမေ။
တစ်ချို့ ကလည်း အဲဒီလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင် ကန့်ကွက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်...၊ ပြည်သူကိုတကယ်ချစ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တကယ်ရယူပေးနိုင်တဲ့သူ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်လေးများ ရလေမလားလို့ အမေ့ကို ပစ်မှတ်အဖြစ် သဘောထားပြီး ဒေသခံနဲ့ ဒေသခံ မဟုတ်သူ ကျေးလက်နေ လူ(၅၀)၀န်းကျင်လောက်ကို စုစည်းပြီးတော့.... တိုက်ခိုက်ပြတာလေ... တကယ်လို့ အမေသာ လမ်းကြောင်းမှားခဲ့ရင် အမေ့ကို ၀က်ဝက်ကွဲမျှ ပြစ်တင်ရှုံ့ ချရင်း ထင်ပေါ်တဲ့ နိုင်ငံရေး သမား... ပြည်သူရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဆိုတဲ့ အမည်လေး တပ်ပြီး နိုင်ငံရေး လောက ထဲကို ၀င်ရောက်ချင်တာပါ.... ဒါတွေကတော့ အမေသိပြီးသားတွေပါ.... ကျွန်တော်က ထုတ်ပြောရမှ ကျေနပ်မှာ မို့လို့ ပြောပြတာနော်.....။
အဲဒီမှာ ဒေသခံတွေနဲ့ အတူ ဘယ်သူတွေပါလဲ အမေသိလား ???? နေ့
ခက်နေတာက သမ္မတကြီးနဲ့ အမေတို့ကလည်း ပြည်သူကို အင်မတန် ချစ်ပြီး အင်မတန် အလိုလိုက်လွန်းတော့... အကြံသမားတွေအတွက် အခွင့်အရေးကောင်း ဖြစ်နေကြတာပေါ့..... (ဒီစကားအတွက်တော့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့အမေ.... ကျွန်တော်တို့က အမေတို့လို စေတနာရော... အတွေ့အကြုံရော... အသက်အရွယ်ရော...... မပြည့်စုံသေးဘူးလေ.... ဒီတော့ ခေါင်းဆောင်စိတ် နည်းတယ်အမေရယ်... ဒီလိုပါ)
နောက်ပြီး အမေ့အမည်ကို တမ်းတပြီး ငိုကြီးချက်မနဲ့ အပြစ်တင် မျက်ရည်ကျတဲ့ သူတွေကိုလည်း မြင်ရတယ်အမေ....။ ကျွန်တော် ဘာတွေးမိသလဲ သိလား တစ်ပွဲတိုး မင်းသမီးကြီးတွေကိုတောင် ဖိတ်ကြားထားပါလားလို့..... တွေးမိတယ်.... ဟုတ်တယ်လေ... သတင်းစာမှာ ဘာတွေ ရေးထားမှန်းမသိပဲ... ချက်ချင်းမျက်ရည်ကျလာတာ အံ့သြလွန်းလို့ပါ.....။
နောက်တစ်ခုက ဘယ်လောက်ဆိုးရွားသလဲ ဆိုတော့.... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့ အနီးကပ်(၅)ယောက်သာ လာပါတဲ့....။ လုံခြုံရေး မလိုဘူးတဲ့လေ.....။
အမေက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတည် ဥက္ကဌ၊ နောက်ပြီး လက်ပန်တောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ ဥက္ကဌလေ...... ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ ခရီးစဉ်ကို လုံခြုံရေးခွင့်မပြုတဲ့ရွာက ရှိသေးတယ်နော်....
သူတို့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာဆိုတာကို သေသေချာချာ နားမလည်ဘူးအမေ.. တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ လုပ်တာပါလို့များ ပြောမလားပဲ...
အမေကလည်း သတ္တိရှိတယ်... ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတယ်.. တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရဲ့ အကျိုးကို ရှေးရှုလုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမေ့ရဲ့ တန်ဘိုးမြင့်လှတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာပါ အချက်အလက်တွေကို သိစေချင်တယ်... လိုအပ်ချက်တွေကို ပြောစေချင်တယ်... လုပ်ပေးသင့်တာတွေကို အကုန်လုပ်ပေးချင်တော့ သူတို့ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လေ....။
ကျွန်တော် တွေးဖြစ်ပါတယ်... တကယ်လို့ အမေ့ကို တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ကြရင် သူတို့ကို ပြန်ပြီး အရေးယူဖို့ မတန်ဘူးလို့ပေါ့.....။
ဒါကြောင့်အမေ့ဆန္ဒအတိုင်း နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် ဆုတောင်းလေးတစ်ခု ပြုလိုက်ပါတယ်....
`` အမေ စိတ်မပျက်ပါစေနဲ့....´´လို့။
လတ်တလောမှာ နိုင်ငံရေးအဆိပ်သင့်နေတဲ့ လူ(၅၀)လောက်အတွက်
အမေ စိတ်မပျက်ပါနဲ့နော်.... အဲဒီ(၅၀)လောက်သော သူတွေ အဆိပ်သင့်ပြီး သေဆုံးသွားပြီလို့ပဲ သဘောထားပေးပါ.....။
အမေ မောပန်းနေသမျှကို ချွေးသိပ်ပေးချင်လို့ အမေ့ရဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပုဝါလေးတွေကိုယ်စီကိုင်... ရေအေးအေးလေး တစ်ခွက်နဲ့ အမေ့ကို စောင့်ကြိုနေကြတယ်.....
လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပြီးရင် အမေ တစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်ပေးနော်...
အမေ့အနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရပ်စောင့်နေကြတယ်...အမေ။
အမေကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးကို တိုးတက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ......။
(ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အမေ့နောက်မှာ ရပ်စောင့်နေကြတယ်...)
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/16/2013 01:04:00 PM